20 ka Kaadhka Debit ee ugu Fiican ee Carruurtu u Noqdaan Lacag Savvy - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn 20 ka Kaadhka Debit ee ugu Fiican ee Carruurtu u Noqdaan Lacag Savvy
Isha sawirka: educationappstore.com
Barashada ku saabsan maaliyadda, marnaba dhib ma yeelanayso inaad bilawdo da'da hore. Khaasatan haddii ay la macno tahay in carruurtaadu ay joojin doonaan inay kugu wareeriyaan fannaaniintii ugu dambaysay ama cuntooyinka qaaliga ah, ee sonkorta leh marka ay fahmaan sida lacagtu u shaqeyso iyo in boorsadaadu aanay ku jirin si toos ah.
Haddaba, ka waran qaar ka mid ah tababbarka maaliyadeed ee gacanta ku haya ilmahaaga? La kulan adduunka kaararka deynta carruurta.
Siinta ilmahaaga kaarka deynta waxay la mid tahay inaad siiso isaga ama iyada kaarkeeda bangiga.
Waxaa jira kaarar kala duwan oo loogu talagalay carruurta suuqa, mid kastaa wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo loogu talagalay inay bartaan oo ay ku dhaqmaan aasaaska maareynta lacagta marka ay kharash gareeyaan, kaydiyaan, oo isticmaalaan lacagtooda.
Kaararka deynta ee carruurta waxay caawin karaan waalidiinta iyagoo u oggolaanaya inay la socdaan lacagta carruurtooda iyo meesha iyo sida ay u isticmaalaan.
Kaar kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyin u gaar ah, iyo sidoo kale kharashyo iyo astaamo kala duwan.
Aynu eegno qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ka hor inta aynaan u gelin dib-u-eegis qaar ka mid ah kaadhadhka lacag-bixinta ee ugu fiican ee carruurta si ay u noqdaan kuwo lacag-yaqaan ah.
Baadhid: Kaarka deynta Vs. Kaarka Debit: Farqiga, Waxyaalaha Ay Ka Mid Yihiin, Iyo Sida Ay U Shaqeeyaan
Waa maxay sababta Kaarka Debit-ka ee Ilmaha?
Kaadhadhka deynta ee carruurta waa kaarar si gaar ah loogu horumariyay carruurta. Waxay u shaqeeyaan si la mid ah kaararka deynta caadiga ah, laakiin waxay leeyihiin astaamo u gaar ah oo ka sooca nooca dadka waaweyn.
Bilawga, kaarka deynta carruurta ayaa bixiya kormeerka waalidka. Waalidiintu waxay u xawili karaan qaddar lacag ah oo hore loo sii go'aamiyay ilmahooda, hubin karaan hadhaaga kaadhka, oo ay daawadaan sida ay lacagta u isticmaalaan.
Waalidiintu waxa kale oo laga yaabaa in ay u dejiyaan xadka kharashka ubadkooda. Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan kaarka deynta ee carruurta qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay in lagu baro da'yarta lacagta halka waalidiintu ay isha ku hayaan akoonnada iyo waxa socda.
Carruurtu waxay ku dhaqmaan inay kasbadaan oo ay lacag ku qaataan meel nabdoon oo haddana u saamaxaysa inay iskood wax u qabsadaan, sida go'aaminta halka ay lacagtooda ku bixinayaan, xisaabinta inta lacag ee ay ka tageen, u kaydinta ujeedooyinka, iyo barashada talooyinka maamulka lacagta muhiimka ah iyo sida loo sameeyo.
Waxaa intaa dheer, in ilmuhu jeebka ku haysto kaarka deynta, way ka ammaan badan tahay inuu qaato lacag caddaan ah. Waxa laga yaabaa inay raad raacaan oo joojiyaan kaarka deynta, si kastaba ha ahaatee lacagta caddaanka ahi weligeed way tagtaa haddii la xado ama meel la dhigo.
Hubi Sidoo Kale: Sida lacag loogu daro PayPal ka Debit Card
Waa maxay waxyaabaha ay ka kooban yihiin kaadhadhka deynta ee carruurta iyo maxay yihiin waxyaalaha la eegayo?
Inkasta oo kaarka deynta carruurtu u shaqeeyo si la mid ah kaarka deynta caadiga ah ee la isticmaalo, habka ay u abuureen iyo faa'iidooyinka ay bixiso ayaa kala saaraysa.
Sida ugu fiican ee suurtogalka ah, aan caadi ahayn.
Markaad iibsanayso kaarka deynta carruurtaada, waxaa jira dhowr waxyaalood oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso.
Xakamaynta waalidku waxay noqon doontaa qodobka ugu muhiimsan. Tan waxa ku jira inta kaalmo ee aad dooratid inaad ku wareejiso kaadhadhka ilmahaaga, inta lacag ee aad doorato inaad ku shubto kaadhka prepaid-ka, iyo waxa aad ku samayn karto lacagta marka ay ku jirto kaarkooda, sida samaynta xaddidaad kharash-bixineed oo sax ah, falanqaynta kharashaadkooda caadooyinka, iyo wixii la mid ah.
Faa'iidada ugu muhiimsan ee kaadhka deynta carruurtu waa xakamaynta waalidka.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah in kaarar badan ay leeyihiin apps mobilada oo aad u fiican kuwaas oo ka dhigaya kuwa fudud in la isticmaalo oo carruurta ku habboon.
Qaarkood waxay soo bandhigaan ciyaaro, su'aalo, iyo macluumaad ujeedadoodu tahay in ilmaha lagu baro lacagta, taas oo ah hadafka marka aan siino caruurteena kaararka deynta.
Waxaa jira laba nooc oo kaarar ah oo loogu talagalay khidmadaha kaadhka: kaararka deynta iyo kaararka prepaid. Kaliya dhowr kaarar oo debit ah ayaa wata khidmadaha isticmaalaha sannadkii ama bishii, in kasta oo dhammaan kaararkii hore loo bixiyay ay leeyihiin.
Arag sidoo kale: 15ka Hab ee ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Diri karo Kaarka Debit
Kaarka Debit vs Kaarka Bixinta
Kaararka deynta carruurtu waxay u kala baxaan laba nooc: debit iyo prepaid.
Waxay kaadhka deynta ku xidhaan akoon bangi, taasoo u ogolaanaysa waalidka inay galaan akoontiga. Caadiyan ma jiraan wax khidmad sanadeed ama bille ah oo la xiriirta kaararka deynta.
Kaarka hore loo bixiyay waa mid ay ku raran tahay qaddar go'an oo lacag ah. Ilaa laga gaadhayo wakhtiga dib u soo dejinta, waa lacagta ugu badan ee aad mari karto. Natiijo ahaan, ilmuhu wuxuu isticmaali karaa oo keliya alaabta kaadhka ku qoran. Kharashaadka isticmaaluhu waxay ku badan yihiin kaararka hore loo bixiyo.
Akhri Sidoo kale: Kaararka Debit-ka Bitcoin ee ugu Fiican 2022
Waa maxay Kaararka Debit-ka ugu Fiican ee Carruurtu Si ay Lacag Savvy u noqdaan?
Waa kuwan liiska magacyadooda:
#1. Kaarka Debit ee Greenlight
Rukunka qoyska ee shan xisaabood ayaa ku kacaya $4.99 bishii.
Ma jirto shuruud da'da ugu yar ee kaadhkan.
Kaarka deynta ee Greenlight, oo la bilaabay 2014 oo hadda leh in ka badan hal milyan oo xubnood, dhammaan waa xanaaq. Sababtoo ah waxay ka kooban tahay wax kasta oo aad ka rabto kaarka deynta carruurta, waxaa loo yaqaan kaarka deynta guud ee carruurta ee ugu weyn.
Bilawga, kaarkani wuxuu u ogolaanayaa ilmaha inuu lacag kaydsado, kharash gareeyo, lacag helo, ku deeqo sadaqo, iyo xitaa lacagtiisa maalgeliyo haddii aad kor u qaaddo qorshaha.
Kaarka Greenlight, waxa jira saddex doorasho. Labada hore waxay u oggolaanayaan ilmaha inuu maalgeliyo sinnaanta. Kor u qaad qorshaha ilaa $7.98 bishii si aad u hesho kaadh uu ilmuhu u isticmaali karo inuu ku maal gashado.
Inkastoo aysan jirin wax xiiso ah oo ku saabsan kaarka, waalidiintu waxay bari karaan carruurtooda iyaga oo u dhisaya ribo been abuur ah oo ay bixiyaan. Ganacsigaan hiwaayadda ah wuxuu kaloo ilmaha barayaa maareynta lacagta.
Way fiicantahay in ilmuhu barto inuu lacag kaydsado si uu u kaydsado ama wax u gato. Waa xirfad maamul maaliyadeed oo muhiim ah.
Kaarka Greenlight waxa uu leeyahay xad wareejin ka sarreeya kaararka kale, taas oo u oggolaanaysa waalidiinta in ay lacag badan ku xawilaan kaararka carruurtooda hal mar.
Iyadoo aan jirin shuruudda ugu yar ee da'da, kaarkani wuxuu u furan yahay dhammaan carruurta raba inay galaan madadaalo waxbarasho oo xiiso leh iyagoo sidoo kale awood u leh inay si wanaagsan u maareeyaan gunnadooda.
Isticmaal abka casriga ah si aad sida ugu fiican uga faa'iidaysato kaarka Greenlight. Software-ku wuxuu isticmaalaa sir-casriga ah si uu uga ilaaliyo kharajka qaybaha aan ku habboonayn carruurta.
Waalidiinta ama carruurtu waxay isticmaali karaan app-ka si ay u dhistaan ​​liiska shaqooyinka carruurtooda si ay u dhammaystiraan, iyo sidoo kale inay dhamaystiraan abaalmarinta ay heli doonaan marka ay shaqada qabtaan.
Marka uu ilmuhu dhammeeyo waajibaadka, waxa laga yaabaa in ay ku abaal mariyaan lacag ama gunno gaar ah. Waa hab xiiso leh in aad ilmahaaga ku heshid sariirtiisa oo uu dhammeeyo shaqadiisa guriga!
Waalidiintu waxay dejisan karaan lacag-bixinno toos ah oo gunno ah waxayna si toos ah ugu bixin karaan xisaabaadka carruurtooda. Waxa laga yaabaa inay jadwal u sameeyaan todobaadkii hal mar ama bishiiba hal mar.
Xitaa si ka sii wanaagsan, waalidku waxay soo diri karaan beddelaad isla markiiba. Bal qiyaas in wiilkaagu uu kula soo xidhiidhayo dukaanka nacnaca si uu kuugu sheego in uu lacag la'aan yahay. Haddii aad dareento inaad daaweyso isaga, waxaad ku samayn kartaa wakhtigaaga adigoo u soo diraya lacag caddaan ah oo yar. Farxadda!
Waalidiintu waxay dejin karaan ogeysiis degdeg ah mar kasta oo ilmahoodu isticmaalo kaarka, taas oo kordhinaysa xakamaynta waalidka. Tani waxay awood u siinaysaa waalidiinta inay il gaar ah ku eegaan caadooyinka wax iibsiga ee carruurtooda.
Ilmuhu waxa kale oo uu la socon karaa kharashaadkooda oo uu iskood u kaydsan karaa. Kaarka Debit-ka Greenlight waa Mastercard, sidaas darteed waxaad ku isticmaali kartaa meel aqbala kaararka master-ka.
Rukunka qoyska $4.99 waxa ku jira 5 akoon oo caruur ah. Markaa wax lacag ah lagama bixinayo kaadhadhka beddelka ee ugu horreeya. Qiimaha $9.99, dhallinyaradu waxay ku raaxeysan karaan habaynta kaararkooda.
Khasaaro ayaa ah in adeegga macaamiishu aanu ahayn kan ugu fiican.
2. Baacsiga First Banking
Ma jiro kharash bishii.
Kaarkani wuxuu ku habboon yahay carruurta da'doodu tahay 6 ilaa 17 jir.
Kaarka Chase First Banking waa kaar caruur ah oo ku cusub suuqa kaas oo ay ku shaqaynayso Greenlight, taas oo macnaheedu yahay in uu leeyahay dhammaan faa'iidooyinka Greenlight iyada oo aan wax lacag ah laga bixin! Ilmuhu waa inuu noqdaa isticmaale Chase si uu ugu qalmo kaadhkan xisaabaadka ee ugu fiican.
Waxay ilmaha siiyaan fursad ay ku meeleeyaan hawlo, maamulaan gunadooda, oo ay dejiyaan ujeedooyin kayd ah oo dhowr ah. Waalidiintu waxay dejin karaan xaddidaadaha ka bixista ATM-ka iyo xaddidaadaha kharashaadka ee qaybaha qaarkood, iyo sidoo kale dejinta ogeysiisyo ogeysiis ah oo leh kontorool waalid oo dhammaystiran.
Codsashada lacag, carruurtu waxay heli karaan wareejin degdeg ah waalidkood. Ma jiraan kharashyo wax kala beddelasho oo shisheeye ah oo leh kaadhkan.
3. BusyKid Visa Kharash Bixin Lacag bixin ah
Kharashka sannadlaha ah waa $19.99, oo leh kaarar dheeraad ah oo qiimahoodu yahay $7.99 midkiiba.
Kaarkani wuxuu ku habboon yahay carruurta da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 16 jir.
Visa BusyKid waa kaar kale oo cajiib ah. Sababtoo ah kani waa kaar hore loo bixiyay, waa inay ku shubaan lacag ka dibna dib loo dallaco markay lacagtu dhammaato.
Fiisaha BusyKid wuxuu baraa carruurta sida loo kaydiyo lacag, kharash gareyn, u wareejinta, ugu deeqo samafalka, iyo maalgelintooda. Si ka duwan kaarka Greenlight, fiisaha BusyKid wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lacag la'aan ku maalgeliso. Shirkadaha dhabta ah, sida Stockpile, ayaa diyaar u ah caruurtu inay maalgashadaan.
Kaadhkani waa ka qaalisan yahay Greenlight, oo qiimihiisu ka badan yahay hal dollar iyo badh bishii.
Waalidiintu waxay diyaarin karaan wareejinta gunnada wakhtiyo gaar ah iyo qiimayaasha liisaska shaqada, iyagoo si toos ah u siinaya carruurtooda markay dhammeeyaan hawlaha. Waalidiintu waa inay sidoo kale oggolaadaan iibsi kasta ka hor inta uusan ilmuhu sii wadin, taas oo ah muuqaal wanaagsan.
Adeegga macmiilka ee BusyKid waa mid aad u fiican, kaas oo lagu daray. Meel walba ayay kaadhka ku aqbaleen. Waxay kaloo kaadhadhka fiisaha ku qaataan khadka.
4. FamZoo Mastercard Prepaid
$5.99 bishii oo leh tijaabo hal bil ah, ama $3.99 bishii haddii aad bixiso sanad ka hor.
FamZoo waxay jirtay ilaa 2006 waxayna ku xuseen sifooyinkeeda kala duwan ee bara carruurta maaraynta lacagta. Dadka waaweyni waxay u dhaqmaan sidii bangiyaal, carruurtuna waxay u dhaqmaan sidii xisaab-hayayaal. Tani waxay kaadhkan ka dhigaysaa mid madadaalo iyo wargelin leh, waxayna u abuurtaa bangi toos ah oo qoyska oo dhan ay ka qayb qaataan.
Si aad u bilawdo, liiska shaqooyinka, waxaad samayn kartaa nidaam abaal-marin lacageed ah. Intaa waxaa dheer, waxay waalidiinta siinayaan fursad ay ku dejiyaan kayd la hagaajiyay si carruurtoodu ay ugu tababartaan maalgashiga iyaga oo aan halis dhab ah gelin.
Waalidku markaa waxay dejin karaan nidaam mushahar-bixineed, soo diri karaan wareejin, amaahin, oo dejin karaan dulsaarka kaydka. Waalidiintu sidoo kale waxay dejin karaan si toos ah u wareejinta gunnada carruurtooda.
Markay diidaan wax iibsiga kaarka, waxay muujinayaan sababta diidmada. Kaarkani waxa uu ka kooban yahay xisaab IOU ikhtiyaari ah oo ilaalinaysa lacagta waalidku ku leeyahay ilmaha.
Ma jiraan wax kharash ah oo ku saabsan dib-u-dejinta kaarka, taasoo ka dhigaysa FamZoo kaarka hore-u-bixinta ugu wanaagsan oo sidoo kale xor u ah dib u soo dejinta. Kaarku malaha wax lacag ah oo wax kala beddelasho caalami ah, kaas oo ku habboon fasaxyada ama safarrada dugsiga ee dibadda. Wax kala iibsiga ATM-yada sidoo kale waa bilaash.
Afarta kaadh ee hore waa lacag la'aan, markaas ka dib wixii kaadhadh ah ee kale waxay ku kacaysaa $2.
Ma jirto wax looga baahan yahay da'da ugu yar ee FamZoo, laakiin ilmaha da'diisu ka yar tahay 13 jir waa inuu lahaado waalid ahaan sidii kaarka sharciga ah. Dhab ahaantii, kaarkani waxa uu u baahan yahay ugu yaraan hal waalid inuu noqdo xisaab hayaha dhammaan carruurta, iyadoon loo eegayn da'da.
$ 3.99 bishiiba
Kaarkani wuxuu ku habboon yahay carruurta da'doodu tahay 6 ilaa 18 jir.
Waxay abuureen GoHenry 2012 waxayna mar hore dhaafeen hal milyan oo macaamiil ah. Kaadhkani waxa uu caan ku yahay taageerada macmiilka oo aad u wanaagsan, kaas oo laga heli karo wada sheekeysi toos ah ama iimaylka 24 saacadood maalintii, todobada maalmood ee usbuuca.
Carruurtu waxay ku gaaryeelan karaan kaarkooda sawirkooda, waxayna u isticmaali karaan kaarka meel kasta, oo ay ku jiraan online, dukaanka dhexdiisa, iyo ATM-yada. Dhalinyaradu waxay dib u eegis ku samayn karaan dhammaan wax kala iibsiga iyaga oo isticmaalaya abka mobaylka. Muuqaalka wanaagsan ee badbaadada ayaa ah inay si toos ah u diidi karaan iibsi kasta oo kaadhka u soo diri kara wax-ka-beddel.
Hel tan: haddii aad dejisay liis hawleed leh abaal-marin lacageed oo toos ah ee hawlihii la dhammaystiray, waxaad heli doontaa tijaabada kaadhka bilaashka ah.
Tan waxa ku jira tijaabo bilaash ah oo hal bil ah oo khidmad sanadeedka ah $36.
Kaarkan da'diisu waa: Waxaa loogu talagalay dhalinyarada
Waxay ka soo saareen magaca kaadhkan calaamada kaadhka - Hadda. Tani si fudud waa wax cusub. Waxay aasaaseen Current 2015 waxayna ujeedadoodu tahay dhalinyarada laakiin waa ay heli karaan dadka da 'kasta leh. Waa mid fiiqan oo tignoolajiyada casriga ah. Lacag dhigashada tooska ah waa sahlan tahay oo degdeg ah, isticmaaluhuna wuxuu dejin karaa sawirka faraha iyo aqoonsiga wejiga si loo dedejiyo wax kala iibsiga.
Ilmuhu waxa uu lacag ku kasban karaa marka uu buuxiyo liiska shaqada ama waalidkood lacag waydiisanaya. Intaa waxaa dheer, ilmuhu wuxuu bartaa sida lacag loo kaydsado, u kharash gareeyo, iyo deeqaha loogu deeqo. Kaadhku wax dan ah kuma laha.
Xakamaynta waalidku waxa ay timaadaa marka waalidiintu ay haystaan ​​ikhtiyaarka ah in ay dejiyaan xaddidaad kharash-bixineed oo ay mamnuucaan wax kala iibsiga ganacsiyada gaarka ah.
Si fudud ayaad u mamnuuci kartaa baayacmushtarka haddi aanad rabin in ilmahaagu galo dukaanka degmada.
Weli wuu geli karaa meheradda, laakiin ma awoodi doono inuu kaarka isticmaalo si uu wax u iibsado.
Aynu ka hadalno maamulka waalidka.
Intaa waxaa dheer, hadda ma ogola wax ka badan.
Ilmuhu wuxuu yeelan karaa xisaab u gaar ah ama mid waalidkiis ama keeda.
Da'da kaadhkani waa: Dhallinyarada ayaa tan ku raaxaysan doona.
Kaarka Copper, kaas oo leh in ka badan 130,000 isticmaale oo jiray ilaa 2019, wuxuu ku xidhan yahay akoon bangi. Tani, oo ay weheliso faa'iidooyin kale oo yar, ayaa ka dhigaysa Copper door ka wanaagsan dhalinyarada marka loo eego walaalaha ka yar.
Waalidiintu waxay samayn karaan xawilaad toos ah oo si joogto ah lacagta ugu shuba ilmahooda bangigiisa. Ka sokow kharash la'aanta adeegsadaha, ma jiraan ganaaxyo daahitaan ah ama khidmadaha dheeraadka ah, mana jirto mas'uuliyad musuqmaasuq.
Ilmuhu wuxuu horumarin karaa aqoontiisa dhaqaale isagoo isticmaalaya abka mobaylka. Waxaa jira maqaallo iyo macluumaad maaliyadeed, iyo sidoo kale su'aalo la waydiiyo isticmaaluhu inuu qaato. Qofka isticmaalaya wuxuu isticmaali karaa kaarkan meel kasta oo uu aqbalo mastercard-ka sidoo kale waxay dib u eegi karaan kharashaadkooda iyo kaydkooda abka.
8. Akimbo Prepaid Mastercard
Ilaa afar kaadh akoonkiiba, ma jirto kharash bishii.
Kaarkan da'diisu waa: Waxaa lagula talinayaa carruurta waaweyn.
Waxay ku xidhaan akoontada waalidka iyo koontada ilmaha ee Akimbo. Tani waxay ilmaha siinaysaa awood uu ku maamulo kaadhka deynta iyadoo wali u ogolaanaysa waalidka inay go'aanka ugu dambeeya gaadhaan. Waalidiintu waxay helayaan ogeysiisyo mar kasta oo ay isticmaalaan kaarka sababtoo ah waxay yihiin maareeyayaasha xisaabaadka.
Taasi waa waxa kaliya ee jira kaarka deynta ee ilmaha marka la eego sifooyinka, laakiin ilmuhu mid ayaa helaya oo waalidku wuu xakameynayaa, markaa waa kaarka deynta aasaasiga ah ee carruurta.
Waxa jira lacag $2 ah mid kasta oo ka bixitaan ah oo lagu sameeyo ATM-ka.
9. Hubinta Dhallin-yarada Lacagta Capital One
Kaarkani wuxuu ku habboon yahay carruurta da'doodu tahay 8 iyo wixii ka weyn.
Barashada wax kasta oo ay tahay in la ogaado oo ku saabsan kasbashada dulsaarka, kaarka Capital One MONEY ayaa ku soo baxaya dusha sare. Ilmuhu wuxuu abuuri karaa yoolal kala duwan iyo kuwo badan isagoo isticmaalaya abka casriga ah.
U kaydinta lacagta baaskiilka cusub ayaa tusaale u ah yoolka. Hadafka kasta waxa ay ku soo bandhigaan sanduuqa u gaarka ah, ilmaha yarna waxa uu la socon karaa inta lacag ah ee ay u qoondeeyeen mid kasta.
Kaarka si fudud ayey u heli karaan waalidiinta, umana baahna xisaab Capital One si ay u isticmaalaan; Waxa kaliya ee ay u baahan yihiin waa akoon bangi oo gaar ah noocay doonto ha ahaatee. Waalidiintu waxay helayaan gal-gal iyaga u gaar ah app-ka moobaylka, kaas oo u oggolaanaya inay la socdaan ficillada ilmahooda, dejiyaan alaarmiga, oo ay xidhaan kaarka daqiiqad kasta.
Sababtoo ah ma jiraan wax kharash ah oo la xidhiidha kaadhka, carruurtu waxay xor u yihiin inay isticmaalaan, la socdaan dheelitirkooda iyo hadafkooda, kana fogaadaan dariiqa waxyeellada inta ay waalidkood la socdaan.
10. American Express waxay u adeegtaa kaarka hore loo bixiyo
$6.95 bishiiba ilaa afar kaadh oo akoon ah.
Kaarkaan, waa inaad ka weyn tahay 18 jir.
Kaarka Amex wuxuu bixiyaa xaddidaad kharash-bixineed oo ka weyn inta badan kaararka kale sababtoo ah waxaa loogu talagalay dhallinta da'doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn. Xadka ka bixista maalinlaha ah waa $750, oo leh xadka kharashka bishiiba $15,000 bishii.
Inkasta oo aan rumaysnahay in tirooyinkani ay aad u bislaadeen xitaa 18-jirka, kaarkani wuxuu caddaynayaa inuu yahay qalab aad u fiican oo lagu baro dhallinta lacagta iyo sida loogu dhaqmo maamulka lacagta habboon.
Waa kaadh hore loo bixiyay oo aan lahayn hadhaaga ugu yar ee bishii iyo wax dib u rarid ah.
Haddii ilmuhu leeyahay xisaab Amex u gaar ah, ma jiraan wax kharash ah oo loogu talagalay wareejinta. Waalidiintu waxay xitaa ku xidhi karaan xisaabaadka American Express si ay xawilaadda uga dhigaan mid sahlan.
Kaarka American Express Serve Prepaid wuxuu siinayaa dhallinta xorriyadda ay lacag ku kharash gareeyaan siday rabaan iyagoo wali ay ilaalinayaan waalidkood. Ma jiraan wax agab ama macluumaad ah oo ku saabsan barashada lacagta kaadhkan.
11. Kaarka Debit Prepaid BlueBird
Qiimaha bishii $0 ilaa afar kaadh oo akoon ah, mid walbana uu leeyahay.
Kaarkaan, waa inaad ka weyn tahay 13 jir.
Sababtoo ah kaarka Amex wuxuu jiray ilaa 1850, waxaa laga yaabaa inaad hubiso in la isku halleyn karo, maadaama weli la isticmaalo 2021. BlueBird waa kaarka American Express ee ugu fiican oo leh adeeg macaamiil oo heer sare ah oo la heli karo 24 saacadood maalintii, 7 maalmood todobaadkii. Waxay ku isticmaali karaan meel kasta oo ay aqbalaan kaararka American Express. Kaarkani waxa uu siiya isticmaalayaasha caawimo wadada dhinaceeda ah.
Ma jirto lacag sanadle ah, si kastaba ha ahaatee, waa inaad kaarka ku iibsataa $5. Si kastaba ha ahaatee, waad iska ilaalin kartaa khidmadda $5 adigoo kaarka ka dalbanaya online:)
BlueBird kaliya maaha carruurta, laakiin waxaa ku jira astaamo laga yaabo inay waalidiintu isticmaalaan si ay u xakameeyaan kaarka ilmahooda. Waalidiintu waxay dejin karaan xaddidaad kharash-bixineed maalinle ah waxayna xitaa ka ilaalin karaan carruurtooda inay wax iibsadaan ama isticmaalaan ATM-yada.
Mar kasta, waalidku waxay isticmaali karaan abka mobaylka si ay u hakiyaan akoontiga kaadhka. Kaarka BlueBird waxa uu ka soo bilaabmay 1800-meeyadii, wakhtigaas oo ay waalidiintu awood buuxda u lahaayeen carruurtooda.
12. Hubinta Dhallinta Bilaashka ah ee Ururka Aliant Credit
Waxay qaadaan khidmad bishii.
Kaarkaan, waa inaad u dhexaysa da'da 13 iyo 17.
Isla marka uu ilmuhu isku qoro e-statements oo uu bishiiba wax ku darsado akoonkiisa bangiga, kaarka Alliant wuxuu bari doonaa xirfado dhaqaale oo dhab ah. Ka dib marka ay dhamaystiraan labadaas tillaabo, macaamiishu waxay abuuri karaan miisaaniyadooda waxayna heli karaan xiisaha lacagtooda.
Waalidiintu waxay saamayn ku leeyihiin kharashka carruurtooda iyagoo dejinaya xaddidaad ka bixista ATM-ka iyo kharashaadka joogtada ah. Waalidiintu sidoo kale waxay lacagta ku shubi karaan akoonnada carruurtooda.
Kaarka Alliant waa kaarka fiisaha oo aan lahayn wax kharash ah oo aan lahayn wax dheelitirka ugu yar, iyo sidoo kale gelitaanka ATM-yo badan. Waxay ku qiimeeyeen Alliant mobile app 5 ka mid ah 5 xiddigood.
Dadka da' kasta leh ayaa isticmaali kara kaarkan.
Mazoola waa kaarka deynta carruurta ee cajiibka ah maadaama uu yahay kaarka lacag-deebinta ee ugu weyn oo aan wax lacag ah lahayn. Carruurtu waxay samayn karaan liisaska shaqada oo leh abaal-marin lacageed oo ay ku qabtaan shaqooyinka, waxay helaan gunno, sameeyaan yoolal kayd ah, oo ay lacag isku diraan dhexdooda.
Markay lacagtooda kala socdaan abka mobaylada ee Mazoola, dhallinyaradu waxay baran doonaan inay wax kaydsadaan.
Kaarkani wuxuu ku habboon yahay dadka da' kasta leh.
Taleefoonka ilmaha, Jassby waa kaadhka lacag-bixinta ee casriga ah. Waalidku waxay dhaqaajin karaan oo demi karaan kaarka daqiiqad kasta, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qoysaska leh carruur badan.
Sababtoo ah abka Jassby Family Finance waxa uu bixin karaa gunnooyin badan oo caruur ah iyada oo aan wax lacag ah lagu wareejin, waxa ay tani ku soo dhawaynaysaa guriga.
Kaarku bilaash buu ahaan doonaa haddii ubadku wakhti ku bixiyo bil kasta. Haddi u yari waydo lacag bil gudaheed, qiimuhu waa $2.99 ​​bishaas.
Ilmuhu wuxuu marin u heli karaa suuqa Jassby ee casriga ah, oo ay ku jiraan ganacsiyada Nintendo, Apple, iyo Starbucks. Kaarka Jassby wuxuu bixiyaa badbaado internet oo heersare ah, markaa uma baahnid inaad ka walwasho in lagugu jabsado ama lagugu hayo ammaan.
15. Kaarka Debit Prepaid Cambaha
Kharashka bishii waa $5.
Waxaad u isticmaali kartaa kaarka Mango sida kaarka farsamada app iyo online, ama kaarka jirka meel kasta oo ay aqbal Mastercard.
Waxay ka qaadaan $3 khidmad ka bixista ATM-ka.
Kaarka cambaha uma baahna labada waalid iyo isticmaaluhuba inay yeeshaan xisaab hubin. Waxay kaadhka ku xidhi karaan koontada kaydka Mango ee uu ilmuhu sameeyay. Haddi uu ilmuhu ku shubo $25 akoontada, isaga ama iyada waxay xaq u yeelan doonaan qiimayaasha APY ee wanaagsan.
Waalidiintu waxay lacagta ku shubi karaan koontooyinka caruurtooda akoonadooda hubinta, ama waxay ku shuban karaan doolar akoontada ganacsatada shuraakada ah, sida Walmart ama Walgreens.
16. Tallaabada Banking
Sababtoo ah waxay bixisaa sifooyin debit iyo kaararka deynta labadaba, kaarka Bangiga Tallaabada waa kaarka ugu fiican ee horumarinta credit. Nidaamka Pay Smart Pay waxa uu ilmaha ka caawinayaa in uu samaysto credit credit isaga oo hubinaya in aanay ka xad-gudbin akoontada. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah kaarka ma laha wax dambi ah oo khiyaano ah, weligood kama qaban doonaan ilmaha mas'uuliyadda eedeymo sharci darro ah.
17. Goolhaye Cashola
Kaarkani wuxuu ku habboon yahay carruurta da'doodu tahay 6 ilaa 16 jir.
Goalsetter Cashola waa kaadhka hore loo bixiyay kaas oo u ogolaanaya xubnaha inay dejiyaan kayd toos ah ujeedooyinka qaarkood. App-ka waxaa ku jira su'aalo weydiin ah in isticmaaluhu ay tahay inuu buuxiyo hal mar toddobaadkii si uu u caddeeyo aqoontooda maaliyadeed.
Kharashka sanadlaha waa $36.
Kachinga waa Mastercard prepaid kaas oo u ogolaanaya waalidiinta in ay dejiyaan si toos ah ubadkooda oo ay helaan ogeysiisyada wakhtiga dhabta ah marka ay isticmaalayaan kaarkan.
Software-ka sidoo kale waxaa ku jira macluumaadka maaliyadeed si uu isticmaaluhu u baran karo wax kasta oo uu ku ogaanayo lacagta. Natiijo ahaan, isticmaaluhu wuu bixin karaa, ku deeqi karaa oo bixin karaa sadaqo. Si kastaba ha ahaatee, kharashka sanadlaha ah ee $36 waa mid xad dhaaf ah.
19. Revolut Junior
Kharashka bishii waa $9.99.
Kaarka hore ee Revolut Junior wuxuu u oggolaanayaa ilmaha iyo waalidka inay la socdaan oo ay falanqeeyaan kharashaadkooda iyo kaydkooda. Waalidiintu waa inay lahaadaan akoon u gaar ah oo Revolut ah. Sidoo kale, qiimuhu wuu sarreeyaa marka aad $9.99 kaarkiiba ku dhufato tirada carruurta qoyska.
20. TD Go Fiisaha Bixinta
Kaarka TD ee hore loo bixiyay wax lacag ah ma leh; buuxinta kaadhka waxay ku kacaysaa $1. Haddii aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah muddo bil ah, kharashku waa $2.50. Dejinta ogeysiisyada iimaylka ee hadhaaga iyo kharashka kaadhka waxa ay u ogolaataa waalidiinta in ay eegaan.
Kaadhadhka lacag-bixintu miyay xoojiyaan farriinta xirfadaha maaraynta lacagta xooggan ka dib dhammaan barashada, ku-dhaqanka, iyo dejinta yoolka?
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso hadda waa in aad mid u saxiixdo magaca wiilkaaga, gabadhaada, ama dhammaan carruurtaada oo arag waxa dhaca.
Bakhaarada Costco waxay caan ku yihiin qiimahooda yaraa haddii ay wax ka iibsanayaan alaabada elektaroonigga ah, alaabta guriga, badeecadaha gaarka ah…
Ma Ku Iibsan Kartaa Kaararka Hadiyada Kaarka Amaahda? Ogow Sida
Qofka la yimid fikradda kaararka hadiyadda wuxuu mudan yahay in dhabarka laga dhufto. Maaha…
Bartilmaameedka waa mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee laga helo kaararka hadiyadda. Taasi waa sababta, marka lagu daro goobta- iyo…
Bartilmaameedku ma iibiyaa kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Nasiib darro, laga bilaabo 2021, Target kama iibin kaararka hadiyadda Amazon mid ka mid ah bakhaarradeeda ama khadka tooska ah.…
Dib u eegista kaadhka deynta ee ugu fiican 2022
Maqaalkani wuxuu bixiyaa sharraxaad dhammaystiran oo ku saabsan dib u eegista kaararka deynta ee ugu fiican. Anagoon sii fakarin, aan saxno...